Umenzi wombhede wosofa
Ifulethi elincane liba yindlela entsha yokuphila nemfashini esp yalokhu kuqashwa okufushane. Ngaphandle kwesikhala esincane, iphaseji elincane, namakamelo amancane, kusenezindlela ezimbalwa zokwenza kubonakale kukhanya, okukhudlwana, futhi muhle ngokwengeziwe. Ngenxa yemikhawulo evulekile, kufanele sihlanganise ifenisha kahle nedizayini yangaphakathi, ngo-…
Yimuphi usofa esivame ukuwuthenga egumbini lokuphumula? Impendulo iyindwangu, isikhumba, noma abanye, okungukukhetha kwangaphambili kwemindeni eminingi. Kepha uzwile ukuthi osofa abangafuthwa? Yebo, Kuzwakala kuxaka futhi kungajwayelekile kubantu abaningi. Isofa elifuthwayo liqukethe i-PVC, futhi ucindezele ukugelezela igesi emzimbeni ...
Kunezinhlobo eziningi zosofa ezahlukahlukene okunzima ukukhetha ukuthi ungena yini ekhaya elisha noma ushintshe elidala. Kepha ngikholelwa ukuthi kungenye yezinto ezijabulisa kakhulu ongakhetha kuzo ezinkulungwaneni zezingcezu. Yingakho nginquma ukubhala le ndatshana. Into eyodwa engiyithandayo ukuhamba uzungeze ifenisha…
Uhlolojikelele Umhlobiso othambile ehhotela umphefumulo wehhotela lonke. Umklamo omuhle wokuhlobisa okuthambile ungadlala indima ekuthuthukiseni umphumela ngezinga elithile. Umenzi wesofa lasehhotela i-Baotian Furniture ikutshela ngomklamo wokuhlobisa amahhotela, Ukuqondanisa nefenisha ethambile. Okokuqala ukukhethwa kwefenisha yehhotela…
Isu lokuthenga kusofa ngokwezifiso zehhotela
Kumele ngabe sahlala ehhotela ngaphandle. Ngabe sinomuzwa wokuthi usofa wehlukile kosofa abasemakhaya ethu? Uma ufuna ukuthenga usofa wasehhotela, kufanele uyikhethe kanjani? Ezinye izinethiwekhi ziye zabuza imibuzo enjalo. Osofa basehhotela bangumkhiqizo ongajwayelekile. Okosofa abangokwezifiso, akulula njengokukhiqizwa kweqoqo elijwayelekile…
Ngasikhathi sinye izinga lokuphila likazwelonke selithuthukiswe kakhulu, futhi ibeka izidingo eziphakeme neziphezulu kwikhwalithi nesevisi yamahhotela. Ngakho-ke, lapho ukhetha ifenisha yehhotela, amahhotela amakhulu anaka kakhulu ukusebenziseka, ubuhle, induduzo, imininingwane nezinye izici, futhi ubeke phambili izidingo eziphakeme zezinkampani zefenisha yamahhotela. Ngobuhle bayo bokudala nemikhiqizo yefenisha ephezulu,…
Yini iphethini yokulala enempilo?
Iphethini yokulala enempilo iqinisekisa ukuthi ngakusasa kugcwele amandla e-esp kubantu abadala abasebenzayo nabafundi bomthwalo osindayo. Ukuhlanzeka kokulala kungumsebenzi ojwayelekile osisiza ukuthi silale futhi sigcine ukulala okunempilo. Ukuhlanzeka kokulala okungekuhle kungaphazamisa ikhwalithi yokulala. Ngakho-ke kucatshangwa ukuthi abantu abaningi abanakho ukulala okunempilo sithemba ukuthi izeluleko ezingezansi ezingezansi ziwusizo ngaphambi kokulala.…